အမေစုကို ကြိုတင်သတိပေးလိုက်ရခြင်း ~ Myanmar Express
ယူကေ မှာ တာလီဘန်အကြမ်းဖက်ဖြစ်ခဲ့သူ နူရူအစ်စလမ်(အဘဦးတင်ဦးဒီနာမည်ကိုကြားဖူးပါလိမ့်မယ်.အလွန်ယုတ်မာသူအကြမ်းဖက်သမားပါ။ငွေနဲ့လဲလာဘ်ထိုးတတ်ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားကို ဟန်ညောင်ဝေ၊ ထွန်းခင်တို့နဲ့သွားပြီး မြန်မာပြည်မှာအကြမ်းဖက်ရိုဟင်ဂျာ ပြန့်ပွားအောင် ငွေကြေးအထောက်အပံ့များရယူခဲ့ကြပါတယ်။နူရူးအစ်စလမ်က က ထွန်းခင် ကို ဥက္ကဌ ရာထူးပေးကာ ရိုဟင်ဂျာ ပရိုဂျက်ကိုကမ္ဘာပြန့်အောင် စပေးခဲ့၏။ အဲဒီထွန်းခင်ကို မင်းဟိန်း ဆိုသူနှင့်ကိုအောင်(၈၈) တိုသူက ဘားမားကမ်ပိန်း(ယူကေ)ကို ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ဘားမားကန်ပိန်း(ယူကေ) ကလဲ ဇိုရာဖန်၊ ဝေနှင်းပွင့်သုန်တို့နှင့် လုပ်စား၍သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်ငွေရှာရတာ ရိုးအီလာတဲ့အချိန် ဗြိတိသျှ လူထူကို ထိုလူမျိုးလိမ် ရိုဟင်ဂျာ issue နှင့် ကမ္ဘာလှည့်၍ ပိုက်ဆံရှာတော့သည်။ဆော်ဒီအာရေးဘီးယားမှလည်း အလှူငွေများသောက်သောက်လဲရခဲ့ကြ၏။ဘားမားကမ်ပိန်း(ယူကေ)၊ မင်းဟိန်းခေါ် မျိုးမင်းအောင်+ဝတ်ရည်လှိုင်၊ကိုအောင်(၈၈) တို့ က ထိုလူမျုိးလိမ်ကုလားများကိုအစိုးရအနှိပ်စက်ခံရခိုင်လူမျိုးများပါဟု ဗြိတိသျှအစိုးရ၊ အမတ်မင်းများကို(မူလကိုယ့်ညီအကိုမောင်နှမသွေးရင်းသားရင်း ရခိုင်လူမျိုးစစ်စစ်များကိုမှအားမနာ) အပြည့်အဝထောက်ခံခဲ့၏။ ထိုယူကေမှတဆင့် အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်းရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များပွားလာအောင် ထွန်းခင် နှင့် ဘားမားကန်ပိန်း(ယူကေ)၊(ယူအက်စ်အေ) တို့ ဝိုင်းလုပ်ကြတော့၏။ ယခုလဲ အမေစု ယူကေလာလျှင် ဒီ issueကိုတင်၍်အမေစု အကြပ်ရိုက်စေမည့် မေးခွန်းများကိုမေးရန်ကိုအောင်(၈၈)ဆိုသူကို ချဉ်းကပ်၍ ပြင်ဆင်နေကြ၏။ ကျနော်တို့မှာ အမေစုကိုလွမ်းလှ၍ အလွန်မြင်တွေ့ချင်၊ ဂါရဝ ပြုချင်နေကြသူများဖြစ်သောကြောင့် ထိုအမေစု၏ စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်စေမည့် မေးခွန်းမျာကိုမမေးစေလိုပါ။သို့ဖြစ်ပါ၍ အမေစုကို ကြိုတင်သတိပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အတွက်ဆိုပြီး စာတမ်းကိုင်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း အဲဒီစာတမ်းများကိုင်ပြီး တောင်းဆိုပေးကြပါဦး။၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ (အထူးသဖြင့်) ကိုမြအေးတစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေများပြောဦးမလဲ။လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ အော်ဟစ်နေခဲ့ကြတဲ့ ပြည်တွင်းနေအစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များနဲ့ မီးလောင်ရာ လေပင့်လုပ်နေကြသော ပြည်ပရောက်ဗမာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များရော ဘယ်လိုတွေများ အော်ကြဟစ်ကြဦးမလဲ။အန်တီ အောင်ဆန်းစုကြည်ကရော လူနည်းစုကို လူများစုက သနားကရုဏာထားဖို့ထပ်ပြီး ပြောဦးမှာလား။အခုလို အုပ်စုဖွဲ့ပြီး မီးရှို့စော်ကားလာတဲ့ တစ်ဖက်နိုင်ငံကနေတရားမဝင်ခိုးဝင်လာပြီး နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကို ဝယ်ယူထားတဲ့ဘင်္ဂါလီကုလားတွေကို မေတ္တာတရားထားပြီး ရေပူရေအေး ကမ်းလှမ်းခိုင်းဦးမှာလားခင်ဗျ။ Myanmar Express
Saudi Arabia support terrorist Rohingya muslims.
12 June 2012 10:10
ကုလားတွေ မြန်မာပြည်လာ စော်ကားတာကို ခေါင်းငုံခံတဲ့ မျိုးယုတ်မျိုး ဗမာသွေးထဲ မှာမရှိဘူး....ဒင်း(ကုလားဘက်ကပါပြောသူ) ကိုလဲ ပြတ်ပြတ်သားသား အမျိုးသားရေးတစ်ရပ် အနေနဲ. အပြစ်ပေးသင့်တယ်
12 June 2012 10:36
Very good write. She will be forget to arakan(Yakhaing). She will remeber darlin rohinger.
ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်တာအစိုးရအကြီးအကဲမဟုတ်လို့ မ ကြေငြာရင်ကိုကိုကြီးချီ့း ကို ခေါင်းရှောင်ကြီးဒေါ်စုစားပေးပါ
12 June 2012 19:58
The person who wrote this post is worrying for his/her beloved Daw Suu will be feeling bad or disappointed because of Rohingya's questions when she will be in England(United Kingdom). " Oh my God " I cann't believe it, you don't worry about your Rakhine brothers/sisters are very much suffering in this time and your are worrying for Mrs. Aris is coming back home(England) to meet her Aris's Family and she will haveagood time and so much fun her trip, fooling around the world and givinganon sense speech, she never consider and think about Rakhine people. She doesn't love them, if she really loves Rakhine people, of cource she is in Rakhine State right now and already canceled her trip.
[image: Photo: ကင်းထောက် အမျိုးသား ကောင်စီ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသွားရန်ရှိ Sunday, May 19, 2013 ပြည်တွင်းမှာ ကင်းထောက် အမျိုးသား ကောင်စီအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသွားဖို့ အတွ...